ओमानसँग किन हार्‍यो नेपाल ? कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तगर्तको त्रिकोणात्मक सिरिजको खेलमा ओमानसँग नेपाल ५ विकेटले हारेको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा नेपालीले बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेनन्।
नेपालले ब्याटिङमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। नेपालका आसिफ शेखबाहेक अन्य खेलाडीले गतिलो पारी खेल्न सकेनन्। खेलपछि नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पर्याप्त रन बनाउन नसक्नाले ओमानसँग पराजित भएको बताएका छन्।
म्याच सकिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। कप्तान मल्लले २४० भन्दा बढी रन बनाउन सकेको भए खेल नेपालको पक्षमा पनि पर्ने सक्ने बताए।
‘सबैभन्दा पहिला त हामीले पर्याप्त रन बनाउन सकेनौं। दोस्रो बलमै विकेट गुमाए पनि हामीले बीचमा राम्रो साझेदारी गरेका थियौं। तर, साझेदारी ठूलो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘जसकारण पनि हामीले २४० माथि स्कोर बनाउन सकेनौं। हामी मानसिक रूपमा कमजोर थिएनौं। अमेरिकालाई हराएर ओमानसँग खेलिरहेकाले मानसिक रूपमा पनि हामी बलियो थियौं। तर, ब्याटिङमा उनीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे।’
टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्नु पनि हारको कारण त होइन ? यो प्रश्नमा कप्तान मल्लले भने, ‘त्यस्तो होइन, हामीलाई लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने थियो। हाम्रो बलिङ स्ट्रोङ हन्छ बन्ने हिसाबले हामीले पहिला ब्याटिङ रोजेका हौं। उनीहरूको दुई सिनियर खेलाडी पनि खेलिरहेका थिएनन्, हामीले २३० भन्दा बढी रनको लक्ष्य दिन सक्यौं भने दबाब दिन सकिन्थ्यो कि भनेर हामीले पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेका थियौं।’